वरिष्ठ मन्त्री भेष बदलेर रातिराति बेपत्ता ! « Drishti News – Nepalese News Portal
१ बैशाख २०७८, बुधबार २ : ०९ मा प्रकाशित
तर, यी सबै औपचारिकता पूरा नगरी, सुरक्षाकर्मीलाई पनि छलेर मन्त्री अज्ञात गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो । मध्यराति कतिबेला फर्किनुभयो भन्ने कुराको पनि ठेगान भएन । यो के मिशन थियो ? प्रधानमन्त्रीकै जानकारीमा हो कि ? भेष बदलेर हिँड्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यतामा उहाँ पर्नुभयो ? यसरी मध्यरात बेपत्ता हुने गर्नुभएका मन्त्री हुनुहुन्छ, विष्णु पौडेल ।
हो, उहाँले नै ०७४ को निर्वाचनअघि केपी ओली र प्रचण्डबीच मिलनकर्ताको भूमिका खेल्नुभएको थियो । चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मका सूत्रधार हो उहाँ । प्रधानमन्त्रीको दूरी ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीसँग बढ्दा माधव नेपालहरुसँग कुरा गर्ने पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँको यो हिँडाई कुन गन्तव्यका लागि हो ? प्रष्ट छैन ।